ပိုးသတ်ဆေးများ၏သမိုင်း - Ignaz Semmelweis
ပိုးသတ်ဆေး technique ကိုနှင့်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ဆေးကုသမှုများ၏သမိုင်းတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရောဂါပိုး၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ကတည်းကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Pasteur ရဲ့အထောက်အထား သူတို့ရောဂါ 19 ရာစု၏နောက်ဆုံးထက်ဝက်သည်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း။
Ignaz Semmelweis - သင်၏လက်စွဲဆေးကြောပါ
ဟနျဂရေီသားဖွားဆရာဝန် Ignaz ဖိလစ် Semmelweis ဇူလိုင်လ 1, 1818 မွေးဖွားသြဂုတ်လ 13, 1865 ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
1846 အတွက်ဗီယင်နာအထွေထွေဆေးရုံ၏သားဖွားဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်, သူ puerperal အဖျားနှုန်းရှိပါတယ်မွေးဖွားသောမိန်းမအကြား (လညျးချေါတ childbed အဖျား) နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသေစေတတ်သောအခွအေနေဖြစ်ခဲ့သည်။
အဘို့အနှုန်း puerperal အဖျား ဝမ်းဆွဲဝန်ထမ်းတွေရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အထီးဆရာဝန်များနှင့်ဆေးဝါးကျောင်းသားများနှင့်အောက်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေသောရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ငါးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်သင့်သလဲ သူကလူနာကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်ဖျက်သိမ်းရေးမှမွေးဖွားပေးခြင်း၏အနေအထားကနေအမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်ခြေ, ဖျက်သိမ်းရေးကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးသူသခှေဲစိတျခွငျးလုပ်နေစဉ် 1847 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာ Ignaz Semmelweis ရဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ, Jakob Kolletschka, လက်ညှိုးဖြတ်လေ၏။ Kolletschka မကြာမီ puerperal အဖျားမြားကဲ့သို့သောလက္ခဏာများ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဤသည်ဝမ်းဆွဲမနေစဉ်ဆရာဝန်များနှင့်ဆေးဝါးကျောင်းသားများကိုမကြာခဏသူသခှေဲစိတျခွငျးဖျော်ဖြေသတိပြုပါရန် Semmelwiss ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ cadavers ကနေအမှုန်ရောဂါထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ဆိုခဲ့။
သူကဆပ်ပြာနှင့်အတူလက်တူရိယာဆေးထူထောင် လိုရင်း ။ ဤအချိန်တွင်ပိုးမွှား၏တည်ရှိမှုယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများသို့မဟုတ်လက်မခံပါ။ ရောဂါ၏ miasma သီအိုရီစံတစျခုဖွစျသညျနှင့်လိုရင်းဆိုနေမကောင်းအငွေ့ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့သူသခှေဲစိတျခွငျးလုပ်နေပြီးနောက်ဆေးကြောဖို့လုပ်သောအခါ puerperal အဖျားများ၏အမှုများကိုသိသိသာသာကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ 1850. ၌သူ၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြားပို့ချသို့သော်သူ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ရလဒ်များကိုရောဂါတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ဘူးသောအအမြစ်တွယ်နေပြီးယုံကြည်ချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြ ၏မညီမမျှ humours သို့မဟုတ် miasmas ခြင်းဖြင့်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာအစဆရာဝန်များကသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်ရောဂါပြန့်ပွားအပေါ်အပြစ်တင်ထားသည့်နာကျင်ကျိန်းစပ်လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Semmelweis 1865 ခုနှစ်တွင် 1861. အတွက်ညံ့ဖျင်း-ပြန်လည်သုံးသပ်စာအုပ်ထုတ်ဝြေခင်းအပါအဝင်ကသူ၏အတွေးအခေါ်များ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မြှင့်တင်ရန် 14 နှစ်ကြာအောင်သူတစ်ဦးအာရုံကြောချို့ယွင်းခံစားခဲ့ရသူမကြာမီအသွေးသည်အဆိပ်သင့်မှုကနေသေဆုံးသွားရှိရာတစ်ရူးခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။
သာဒေါက်တာ Semmelweis ရဲ့သေသောနောက်တီထွင်ရောဂါပိုးများကူးစက်သီအိုရီခဲ့, သူသည်ယခု nosocomial ရောဂါပိုးသတ်ဆေးမူဝါဒနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ယောသပ်သည် Lister: ပိုးသတ်ဆေးနိယာမ
စံဆယျကိုးရာစုအလယ်အသုံးပြုပုံ Post-စစ်ဆင်ရေးရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုကိုအဓိကခွဲစိတ်ကုသခံယူလူနာများ၏ထက်ဝက်ခန့်မှာအသေခံဘို့မှတ်။ စစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်စွာပေမယ့်လူနာသေဆုံး: ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကဘုံအစီရင်ခံစာဖြစ်ခဲ့သည်။
ယောသပ်သည် Lister ခံမှုရှိတဲ့သန့်ရှင်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခန်းထဲမှာ deodorants ၏အသုံးဝင်မှု၏အရေးပါမှုကိုလက်ခံယုံကြည်ခဲ့; , Pasteur ရဲ့သုတေသနမှတဆင့်သူပြည်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်သောအခါ, သူသည်မိမိအပိုးသတ်ဆေးခွဲစိတ်နည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လုပျတယျ။
Semmelweis နှင့် Lister ၏အမွေအနှစ်
လူနာအကြား Handwashing ယခုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု setting တွင်နာမကျန်းပျံ့နှံ့တားဆီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါဟာနေဆဲဆရာဝန်တွေ, သူနာပြုများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကအခြားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အပြည့်အဝလိုက်နာရရန်ခက်ခဲသည်။ ခွဲစိတ်အတွက်မြုံ technique ကိုနှင့်မြုံတူရိယာအသုံးပြုခြင်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ရော့ခ် Tumbler အခြေခံ
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း: တစ်ဦးက Victimless ရာဇဝတ်မှု?
အွန်လိုင်းသင့်ကနေဒါဝင်ငွေခွန်အခွန် File ကိုဘယ်လို
Indocumentados: သား, sus derechos y က por Que မျှ se regularizan quiénes
ဂေါက်ကွင်းအတွင်း '' Ladies Tees 'နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ဟာအဲဒီဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရဘဲနေရမည်
Julius ကဲသာဘုရင်၏ဘဝအသက်တာအတွက်အရေးကြီးအဖွဲ့များ၏တစ်ဦးက Timeline ကို
Black ကသမိုင်းနှင့်အမျိုးသမီး Timeline ကို 1990-1999
Watch မှဂျိမ်းစ်ပက်တာ, Movies
သင်၏လက်ချောင်းတစ် Weathervane အဖြစ်နှစ်ဆကိုဘယ်လို
အဆိုပါအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ချိုင့်ညီလာခံတက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
Trabajos mejor pagados en အမေရိကန်နိုင်ငံအပြစ်တရား Estudio universitarios los 10
ဟိရဂဏရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို: ya, yu, yo - や, ゆ, よ
"Embrasser" (ကိုခင်တွယ်ဖို့ Kiss မှ) Conjugate လုပ်နည်း
Semicolon နှင့်အတူ Punctuating